ISTICMAALKA BASASHA-SLIZUNA: HALABUURKA, SIFOOYINKA WANAAGSAN IYO WAXYEELADA SUURTOGALKA AH - BOW
Slyzun qaanso: sifooyin faa'iido leh iyo ka hortag
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee basasha, meel gaar ah waxaa qabsadey qaansada slyzun, taas oo sidoo kale loo yaqaan mangyre, drooping, glandular. Waxaa la rumeysan yahay in waxay heshay magaceeda ugu weyn ee dheecaanka firfircoon ee cabitaanka marka la jarayo geedka. Waxay yiraahdaan waxay u egtahay ilmo. Waxay ku kori kartaa oo kaliya sida warshad beeraha ah ee beeraha khudradda, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa duurjoogta carrada dhagaxda iyo cawska ee Eastern iyo Western Siberia.
Waxyaabaha kiimikada ee slizuna basasha
Slizun basasha ah sida sharaxaadda waxay leedahay tiro aad u weyn oo ah xeryahooda nafaqo, sidaas darteed, marka lagu daro madaxtooyada, qiimeeyo guryaha wanaagsan ee bogsashada.
Ma taqaanaa? Noocaan nooca basal waxa ku jira saliid aad u yar oo la barbar dhigo noocyo kale. Sidaa daraadeed, waa qadhaadh, qandho iyo ur xun. Xitaa carruurtu waxay ku cunaan farxad weyn. Ka dib goynta, baalasha basasha sii hayso cusub iyo bogsiinta guryaha muddo toddobaad ah.
Halabuurka ee slizuna basal waxaa ka mid ah kala duwan yaryar iyo macruufiyeyaasha. Kuwani waa iron, manganese, zinc, nickel, potassium, cusbada, phytoncides, flavonoids, acids triticpenic iyo kuwo kale. Sonkorta ku jirta waa 3%, carotene - qiyaastii 1.5%. Waxa kale oo jira fitamiinada PP, B1, B2, C iyo kuwo kale. Dhammaantood waxay si fiican u nuugaan jirka, iyo isticmaalka joogtada ah ee basasha waxay yeelan kartaa saameyn ku daweynta. Isla mar ahaantaana dhirta ay ku yar tahay kalooriyeyaasha - 100 g waxaa ku jira 32 kcal oo keliya.
Qodobbada waxtarka leh ee saliida basasha ee caafimaadka
Maaddaama ay ka kooban tahay fitamiin B-vitamiin iyo birta, saliida basasha ee loo yaqaan 'slizun' ayaa loo isticmaalaa daawaynta dhiig-yaraaneed. Intaa waxaa dheer, waxay kordhisaa hemoglobin, waxay xoojisaa derbiyada xididdada dhiigga, waxay leedahay saameynta dhiigmarka, waxay kordhisaa jiritaanka jidhka ee nooc kasta oo caabuq ah, waxay hagaajisaa rabitaanka cuntada.
Saameynta wanaagsan ee maskaxda bini'aadamka ayaa la ogaaday. Casiirka Mucus wuxuu ku dhejiyaa derbiyada caloosha, wuxuu yareeyaa bararka, soo celiyaa shaqooyinka qarsoodiga ah, wuxuu hagaajiyaa mareenka caloosha iyo mindhicirka. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunka caloosha, caloolaha caloosha. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dhibaatooyinka ilkaha: cirridka cirridka, cirridka.
Waa muhiim! Basasha waxay ku hayaan guryaha bogsashada labadaba foomka la qalajiyey iyo la qaboojiyey. Waxaa lagu dari karaa goosashada khudradda kale, waadna si madax-banaan u soo qaadan kartaa, qashinkaaga iyo dhirta.
Slizun basasha ayaa leh hanti cusub. Maaddooyinka caaga ah ee ku jira waxay ku lug leeyihiin bogsashada degdegga ah ee boogaha, ka hortagga infekshankooda. Waad ku mahadsan tahay fitamiin B, waxaa si wanaagsan loo isticmaalaa daaweynta cudurrada xubnaha jirka dhiiga iyo qanjirka thyroid. Wuxuu caadi u yahay heerka kolestaroolka dhiigga, wuxuuna taageeraa shaqada wadnaha.
Isticmaalka basasha ee karinta
Tani kala duwan ee basasha loo aanaynayo noocyada saladhka. Tusaale ahaan, saladh aad u dhadhan fiican leh ayaa laga sameeyaa maqaarka basasha (200 g), basal (100 g), salaar caleen (200 g), dhir (100 g), 2 ukun la kariyey. Dhir cagaaran iyo slizuna yaryar oo la jarjarey, ukunta ayaa sidoo kale jar jartey, caleemaha caleemaha waxaa lagu jarjarey dhir, iyo basasha - ooyar. Dhammaan tani waa isku qasan, labbisto majones ama labeen dhanaan, milix iyo basbaas ayaa lagu daraa dhadhanka.
Laakiin waxay u isticmaalaan soodhada kaliya. Marka la karinayo, basal-slizun ayaa laga helay isticmaalka diyaarinta suxuunta hilibka, cuntada badda, khudradda kulul, marka hore. Waxaa loo isticmaalaa sida bahalka iyo khudaarta kale.
Ma taqaanaa? Caleemaha Young ee basasha u koraan si dhakhso ah, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro xilli kulaylka oo dhan. Caleemaha ugu horreeya waxay u muuqdaan guga horraantii, sida ugu dhakhsaha badan barafku wuxuu dhalaalayaa, iyo ugu dambeyntii waxay qaadi kartaa dhaxan dayrta. Laakiin xitaa xilliga dayrta caleemaha ayaa weli ah hindise iyo casiir leh sida xagaaga. Waxaa kale oo lagu daraa - dhirta dhif ayaa laga yaabaa in cudurku ku dhaco.
Slizun basasha waxaa loo isticmaalaa cuntooyinka kale. Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa omelet cajiib leh isaga. Si yaryari 50 g basasha iyo spasserovat ee subagga, ka dibna ku dar 20 g oo ah dhir jar jartey. Ku dar milix iyo basbaas ay u dhadhamiyaan, ku shub ukunta, daroogada caanaha (3 xabbo iyo 100 ml, siday u kala horreeyaan). Labada dhinacba waxaad ku shiishaa.
Hababka wax lagu goosto basal-slizuna
Waxaad samayn kartaa suuq yar oo suuq ah siyaabo kala duwan: qalalan, pickle, pickle, qallalan ama ku darso bannaannada alaabta kale. Waxaad isticmaali kartaa oo kaliya caleemaha cagaaran, laakiin sidoo kale nalalka.
Waa muhiim! Iska yaree caleemaha basal-slizuna ayaa lagu taliyey hal mar labadii toddobaadba mar. Sidaas darteed waxaad ku kordhin doontaa waxyaalaha ku jira fitamiin C, sonkorta, iyo caleemaha naftooda waxay noqon doonaan kuwo jilicsan. Intaa waxaa dheer, waxay ka hortagtaa caleemaha guluubka.
Marka basasha la koray dhulka, waxaa lagu talinayaa in la gooyo cunnida sida sannadka saddexaad ee nolosha. Waxay ahayd kadib in uu helay nafaqada ugu badan. Wixii booguhu ka baxo baalasha 25 - 27 cm dheer, waxay ku sameeyaan cimilada qalalan.
Si loo qaado basasha, caleemaha waa in si wanaagsan loo dhaqo, googooyaa qiyaastii 10 cm iyo blanch ilaa 2 daqiiqo biyo karkaraya. Ka dibna la dhigay on barmiil jeermis dilay iyo ku shub marinade. Isku dar ah ee marinade waxaa laga diyaariyey 50 g oo cusbo ah, 100 ml oo khal ah 9%, 50 g oo sonkor ah halkii litir oo biyo ah. Bangiyadu way isku xidhan yihiin, marba markaa way xirxiraan.
Wixii saliidda basasha brine waa la diyaariyaa sida ku cad qandhada kor ku xusan. Gacmaha oo la jarjaray, la jarjarey oo la jarjaray ayaa ku faafay baaquli dhaldhalaalka ahna ku shub brine la qaboojiyey. Ka dibna ku dabool faashad, ku daboolka daboolka ama saxanka oo lagu riixo culays. Awoodda waa in lagu hayaa toddobaadkii meel diiran, ka dibna nadiifi qaboojiyaha.
Wixii qalajiyo basasha ka dib markii la dhaqo shan daqiiqo oo biyo ah cusbo ku jirta (50 g oo cusbo ah halkii litir oo biyo ah). Ka dibna laga saaray, ayaa loo oggol yahay in ay ka baxo oo ay qalalaan. Ka dib markaa, jarjar oo ku sii foorno dubista si aad u qallajiso qorraxda ama foornada heerkul ah 50-60 ° C. Basasha ayaa si joogto ah u kiciya, qaadashada qaybaha la qalajiyey.
Geedka oo dhan ayaa la goosan karaa xilliga qaboobaha adoo qodaya dhulka oo leh basal. Ka dib, iyada oo aan ka saareen dhulka ka, geedka waxaa la dhigay sanduuqyada iyo loo diray in lagu keydiyo Maqsin. Sannadka soo socda waxaa loo isticmaali karaa degel cusub.
Slyzun qaanso - dhirta malab
Dad yar ayaa og, laakiin qaansada slyzun waxaa lagu qiimeeyaa sida geedka malab. Waxay leedahay ubaxyo qurux badan oo leh qani ku ah qani ku ah nectar, sidaas darteed cayayaanka, oo ay ku jiraan bees, raalli ka ah booqo. Qiyaastii 100 kg oo malab ah ayaa laga saari karaa hal hektar oo ah beeritaanka basasha. In malab yar, waxaad weli fahmi kartaa qoraalada basasha, laakiin ka dib markii ay koriinkeeda, way baaba'ayaan. Honey lafteedu waxay leedahay midab jaalle ah, iftiin, laakiin wax yar oo hufan. Waxay uducsataa miro fiican.
Sidii horey loo soo sheegey, jinsiyadu waxay leedahay faa'iido wayn, laakiin Waxa kale oo uu leeyahay khilaaf. Run, way yar yihiin. Laguma qaadi karo inta lagu jiro jiritaanka cudurrada caloosha iyo mindhicirada, iyo sidoo kale haddii ay jirto xaalad xumo shakhsiyeed.
Nasiib darro, dad yar ayaa maanta wax ka ogaanaya qiimaha daawada, cuntada iyo qiimaha qurxinta ee basasha-slizuna. Waa dhif in la arko beeraha, mararka qaarkood loo isticmaalo sariiraha ubaxa, maadaama ay ku siiyaan inflorescences-kubadaha quruxda badan. Laakiin kuwa ku qanacsan dhadhanka basasha, ma diidi karaan dhulkiisa beerta.